सत्तारुढ नेकपाको काखमै बसेर मेडिकल विद्यार्थीमाथि ताण्डव मच्चाउँछन् बसरुद्दिन अन्सारी - Namaste Post
सत्तारुढ नेकपाको काखमै बसेर मेडिकल विद्यार्थीमाथि ताण्डव मच्चाउँछन् बसरुद्दिन अन्सारी
नमस्ते पोस्ट २०७६, १४ कार्तिक बिहीबार १८:२० 0
काठमाडौं: विरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक बसरुद्दिन मिया अन्सारीको फेसबुक अकाउन्ट खोलेर हेर्दा मात्रै पनि भारतीय चलचित्र उद्योगका एक्सन मुभी वा दक्षिण भारतीय चलचित्रका डनवाला मुभीको झल्को आउँछ। देशको प्रधानमन्त्री, ठूला पार्टीका अध्यक्ष, ठूला भनिएका पार्टीका ठूला वा प्रभावशाली नेता सबैसबै उनकै पछि पछि दुगुरिरहेका दृश्यहरु। उनको फेसबुक खोल्नेबित्तिकै देख्न पाइन्छ दुईतिहाइको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको उनको एकल तस्विर। जहाँ प्रधानमन्त्री केपी ओली उभिएको ठाउँमाथि राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी तस्विर र छेउमा उनै अन्सारी मुस्कुराइ रहेका देखिन्छन्। फोटोको क्याप्सनमा उनले लेखेका छन् ‘रामदान मुवारक’ र केपी ओलीले पहिरेका छन् सेतो जालीवाला मुस्लीम समुदायले पहिरिने टोपी। सायद यो तस्विर रामदान पर्वको समयमा खिचिएको हुनुपर्छ। अरु त कति हो कति, फुर्सद निकालेर स्क्रोल गर्नुपर्छ सबै छर्लङ्गै देखिन्छ।
त्योभन्दा प्रष्ट चित्र त्यतिवेला आउँछ जतिवेला चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिका संयोजक प्रकाश चन्दलगायत विद्यार्थीले काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बसरुद्दिन अन्सारीले गरेका हर्कतबारे सुनाउँछन्।
‘बसरुद्दिन अन्सारीलाई कानून लाग्छ कि लाग्दैन? उनको लगानी रहेको नेशनल मेडिकल कलेज रहेको क्षेत्र नेपालमा नै पर्छ कि पर्दैन? सरकारले तोकेकोभन्दा अवैधानीक तवरले लगिएको शुल्क फिर्ता गर र सोहीअनुसार शुल्क लिने नियमलाई कार्यन्वयन गर भन्दा हामीले भाला खानुपर्ने, खालि रक्सीका बोत्तलको प्रहार खानुपर्ने, सार्वजनिक स्थानमा ज्यान गुमाउनुपर्ने धम्की खानुपर्ने तर, प्रहरी प्रशासनकै अगाडि हामी चढेको भ्यान तोडफोड हुँदासमेत गल्ति गर्नेलाई कारवाही नहुने?’ चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिका सदस्यहरु पत्रकार सम्मेलमा प्रश्न गरिरहेका थिए, ‘आखिर यो देश कसको हो? कानुन अनुसार हामीले पढ्न पाउनुपर्छ भन्दा भाला खानुपर्ने?’
यसरी सुरु भयो आन्दोलन
गण्डगि मेडिकल कलेजमा सरकारले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क लिएको मा विरोध जनाउँदै आन्दोलन गर्न थालेको धेरै भइसकेको थियो। तर सुनुवाइ गरिदिने कोही नभएपछि विद्यार्थी बोल्नुले मात्रै कुनै अर्थ राख्दो रहेनछ। उनीहरुको आन्दोलन त जारी रहने भयो तर नतिजा केही नआउने भयो।
सरकारले तोकेकोभन्दा दशौँ लाख बढी पैसा कलेज सञ्चालक बनेर आएका मेडिकल माफियाले अशुली नै रहे। विद्यार्थीहरु विरोध गरि रहे, राज्य चुपचाप मुकदर्शक बनिरह्यो। यि दुर्दशाहरु बेलाबेला हुने शिक्षा मन्त्रालयका बैठकले मथ्थर पार्दै लग्यो। विद्यार्थी र अभिभावकलाई झुलाउने र गलाउने प्रपञ्चमा मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरु अग्रसर देखिए, राज्य तिनको कानुन विपरित भइरहेको पैसा अशुलीमा सहयोगी बनिरह्यो। यो कुनै एउटा मेडिकल कलेजको मात्रै अवस्था थिएन, देशैभरका मेडिकल कलेजको हालत यही थियो।
यसैक्रममा करिब तीन महिना पहिले चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुले यस्तो अन्यायका विरुद्ध लड्ने योजना बनाए। सीएमसीका विद्यार्थी प्रकाश चन्द, मान्यता थापा, प्रविण स्यायङतान र काठमाडौँ विश्वविद्यालयका नरेश भट्टलगायत विद्यार्थी काठमाडौँमा जम्मा भएर छलफल गरेपछि पत्रकार सम्मेलन गरेरै आन्दोलनलाई प्रभावशाली बनाउने घोषणा गरे। त्यसपछि चितवन फर्किएका प्रकाश चन्द लगायत विद्यार्थीले करिब दुई महिनासम्म चितवन मेडिकल कलेजमा आन्दोलन चर्काए।
उनीहरुको आन्दोलनको निरन्तरतामा सम्पूर्ण विद्यार्थी र अभिभावकको गतिलो साथ रह्यो। अन्तत: कलेज प्रशासन उनीहरुसामू सम्झौता गर्न बाध्य भयो। कात्तिक १८ गतेसम्ममा कार्यन्वयन गरिसक्ने गरी संघर्षरत विद्यार्थी र कलेज प्रशासनबीच भएको छ। तर, अहिलेसम्म कलेज प्रशासनले कुनै चाँसो देखाएको छैन।
प्रतिविद्यार्थी १० देखि ३० लाखसम्म बढी शुल्क अशुलेका मेडिकल कलेजले बरु सम्झौत गरेपश्चात सरकारलाई नै ‘सरकारले तोकेको शुल्कमा विद्यार्थी पढाउन नसकिने र यदि यही शुल्क पढाउन सकिन्छ भने सरकार पढाउनु पर्ने। त्यसका लागि सरकारलाई तालाचाबी बुझाएर सहयोग गर्न तयार रहेको’ चुनौतीपूर्ण धम्कि दिइ सकेका छन्। तर, सरकार सुनेको नसुनेकै गरिरहेको छ।
त्यसपछी विरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेजमा बसरुद्दिनको ताण्डव
चितवन मेडिकल कलेजमा सम्झौतासम्म गराउन सफल भएपछि चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिले त्यसलाई देशव्यापि बनाउने भन्दै विरगञ्ज पुगे। विरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले तपाईंहरुको जस्तै हाम्रोमा पनि समस्या छ आइदिनुपर्‍यो भनेपछि करिब डेढ दर्जन विद्यार्थी बोकेर प्रकाश चन्द विरगञ्ज हान्निए। त्यहाँ विद्यार्थीसँग छलफल भएपछि एउटा र्‍यालीको आयोजना गर्ने निश्कर्षमा पुगे।
त्यसका लागि स्पिकर, ब्यानरलगायतका सामाग्रीहरु तयार पार्दै थिए, नेशनल मेडिकल कलेजका सञ्चालनक बसरुद्दिन मिया अन्सारीको फिल्मी रुपमा इन्ट्री हुन्छ। ‘हामी विद्यार्थी भाइबहिनिसँग कसरी अगाडी बढ्ने र तत्काल के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका थियौँ बसरुद्दिन अन्सारी करिब एक दर्जनभन्दा बढी मान्छे बोकेर आइपुगे’ संघर्ष समितिका संयोजक प्रकाश चन्द सम्झिन्छन्, ‘त्यसपछि त्यहाँ देखिएको दृश्य यति भयानक थियो कि हामीले कल्पनासम्म पनि गरेका थिएनौँ।’
मान्यता थापाका अनुसार उनीहरुले रिजर्भ गरेर लिएको माइक्रोमा अन्सारीसँगै आएका मानिसले तोडफोड गरिदिए र उनीहरु माथि हातपातसमेत गरे। ‘हामी भएको ठाउँमा आएर उनीहरुले सिधै धडपकडमा उत्रीए। हामी केही पनि बोलेनौँ, त्यसपछि विद्यार्थी साथिहरुले हामीलाई छेकेर सुरक्षित गर्नुभयो’ मान्यता त्यो दिनको भयवित दृश्यलाई सम्झिन्छिन् ‘विद्यार्थी भाइबहिनिले नछेकेको भएत हामी सायद सध्य नै फर्किन्थेनौँ होला।’ मान्यता बसरुद्दिनले त्यहीवेला ‘सीएमसी आपका लास जाएगा’ भनेर धम्काएको बताउँछिन्।
त्यति भएपछि सबै विद्यार्थीहरु प्रशासनसँग सुरक्षा माग्न गए। प्रशासन र सुरक्षा बलले विद्यार्थीसँगै प्रहरी पनि पठाइदियो। त्यसपछि होस्टेलसम्म पुगेर चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिका सबैजना फर्किए। त्यसै दिनको राति बसरुद्दिन अन्सारीले आफ्ना निकटका विद्यार्थी र बाउन्सर प्रयोग गरेका देखाएको हर्कत दक्षिण भारतीय फिल्मको क्लाइमेक्स सिनजस्तो थियो।
कसैलाई भिडियो रेकर्ड गर्न नमिल्ने, कसैले बोल्न नमिल्ने। कोही बन्द कोठामा थुनिएको छ, कसैलाई होस्टेलको छतमा लिएर लाइन लगाएर यातना दिइएको छ। कतिपयलाई ज्यान मार्नेसम्मको धम्की दिएको त्यहाँका विद्यार्थी प्रष्टरुपमा खुल्नै डराउने गरी बताइरहेका छन्। त्यो दिन उनीहरुले रातभर होस्टेलमा ताण्डव मच्चाएपनि विद्यार्थीहरु भने झनझन आक्रोशित बन्दै गइरहेका छन्। उनीहरुले ‘सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिन नपाइने र यसअघि लिएको सबै अवैध शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने’ माग राखेर निरन्तर आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राखेका छन्।
अनुगमनलाई नै प्रभावमा पार्न सक्थे/सक्छन बसरुद्दिन, विरामीलाई त किन्दिन्थे!
बसरुद्दिन अन्सारी त्यस्ता खतरनाक मेडिकल शिक्षाका व्यापारी हुन् जुन् सुन्दा पनि पत्याउन गाह्रै पर्छ। उनका अनेकमध्येको एउटा किस्सा काठमाडौँको घट्टेकुलोमा रहेको काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजको उपद्रो पनि हो।
घटना २०७४ साल भदौ महिनाको हो। देशकै प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारबाट केही मिटरको दुरीमा रहेको घट्टेकुलो क्षेत्रका पसल, चोक र गल्लीमा मानिसको चहलपहल सधैंजस्तो सामान्य थियो। बस्तीको बीचमा ९ तले भवन सबैभन्दा अग्लो डन झैं भएर उभिएको छ। तर व्यस्त गल्लीमा हिँड्ने मानिस कोही पनि त्यो भवनमा प्रवेश गर्दैन। भवनभित्र ती चोक र गल्लीमा देखिनेजति पनि चहलपहल छैन। यद्यपि यो राज्य प्रणालीले दैनिक सयौंको चहलपहल र उपचार हुने प्रमाणित गरेर सम्बन्धन दिएको काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पताल थियो त्यो।
सम्बन्धन पाएपछि पनि अस्पतालका सुनसान तस्बिर पत्रपत्रिकामा देखिन थालेपछि सञ्चालकले बिरामी बढाउने रणनीतिअनुसार भदौ १० मा विज्ञापन छापेर ‘निःशुल्क उपचारको अफर’ घोषणा गरेका थिए। तर पनि अस्पतालमा बिरामी गएनन्। अस्पतालले भदौ ३० सम्मका लागि जारी अफरमा ओपिडी, बेड शुल्कमा शतप्रतिशत, रेडियोलोजिकल परीक्षणमा ४० र प्रयोगशालाजन्य परीक्षणमा ५० प्रतिशत छुटको अफर घोषणा गरेको थियो। त्यसको केही दिनअघि मात्रै अस्पतालले डाक्टर/नर्सका लागि विज्ञापन खोलेको थियो।
इमर्जेन्सी, ओपिडी र वार्डमा न एकजना विरामी हुन्थे न डाक्टर नै। बसरुद्दिनले आफ्नै स्वमित्वमा रहेको वीरगन्जमा सञ्चालनमा रहेको नेसनल कलेजका इन्टर्नसिप चिकित्सक काठमाडौं नेसनलमा ड्युटीमा खटाउँथे।
२०७० कात्तिक २७ गते करवीरनाथ योगी नेतृत्वको टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनमा अस्पतालमा ६५ जना फ्याकल्टी (सिनियर कन्सल्टेन्ट) कार्यरत हुनुपर्छ। योगी समितिले दिएकै प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने ३ सय शड्ढयाको अस्पतालमा कम्तीमा १ सय ८० जना बिरामी भर्ना भएको हुनुपर्छ। चार सयभन्दा बढीले ओपिडी भ्रमण गरेको हुनुपर्ने हो भने कम्तीमा सय बिरामी दैनिक भर्ना भएको हुनुपर्ने हो।
अस्पतालको पूर्वाधार र उपकरण अवस्थाको अनुगमन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको टोली भदौ ८ मा अस्पताल पुगेको थियो तर अस्पताल सञ्चालकले आफूहरुले शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति पाएको भन्दै छिर्नै रोकेका थिए। अनुगमन गर्न नपाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयसमेत त्यस विषयमा केही बोल्न सकेन। त्यसअघि योगी समितिले अनुगमन गर्दा पनि केही उपकरण र सबै प्राध्यापक नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्जबाट ल्याइएको थियो।
त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालयले सम्बन्धन खारेज गर्‍यो, अदालतले थमाइदियो
हाम्रो देशको कानुनका विषयमा अलिकति मात्रै बोल्यो भने पनि त्यो अदालतको मानहानि हुने खतरा बढ्छ। धेरै बोल्न मिल्दैन। तर सचेत नागरिक सबैले बोल्नुपर्छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषदले काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई दिएको सम्बन्धन खारेज गरेको थियो।
कलेज सञ्चालनका लागि मापदण्ड पूरा/नभएको सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयद्धारा गठित ३ सदस्यीय छानबिन समितिले कलेज अवैध रुपमा संचालन भइरहेको प्रतिवेदन त्रिवि कार्यकारी परिषदमा बुझाएपछि त्रिविले काठमाडौं मेडिकल कलेजले पाएको अनुमति खारेज गरेको थियो। कलेज संचालनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुमति समेत नलिएको पाइएपछि छानवीन समितिका संयोजक सहप्राध्यापक सनत देवकोटाले जानकारी दिएका थिए।
उनले मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि आवश्यक कुनै पनि प्रक्रिया पूरा समेत नभएकाले अस्पताल बैध रुपमा संचालन नभएको पुष्टि भएको प्रतिवेदन त्रिविमा बुझाएका थिए।
त्रिवि सभा तथा कार्यकारी परिषदले अस्पताल बैध रहेको वा नरहेको छानवीन गर्न देवकोटा नेतृत्वमा विश्वविद्यालयका डा. प्रशान्त भट्ट र परशुराम कोइराला सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
समितिले अस्पतालको स्थलगत अनुगमन गरि तयार पारेको प्रतिवेदन त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभा तथा कार्यकारी परिषदलाई बुझाएको थियो। प्रतिवेदनले दिएको सुझावको आधारमा परिषदले नेशनल मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्दै उसलाई दिएको अनुमति खारेज गरेको थियो।
तर काठमाडौँ नेशनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन तत्काल खारेज नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दियो। त्रिविको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने आदेश माग्दै नेशनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक अन्सारीले असोज ३१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
उनको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै कार्तिक ८ गते न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले सम्बन्धन खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो।
मापदण्ड पूरा नगरेको उक्त कलेजलाई साउन १२ गतेको त्रिवि कार्यकारी परिषदले सम्बन्धन दिएको थियो।
बसरुद्दिनको ताण्डवमा कसको सहयोग छ?
एउटा देशको जो सुकै व्यक्ति पनि कानुनभन्दा माथि हुनसक्दैन र हरेक नागरिकसरह नै हुन्छ भनेर अहिलेको संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ। तर बसरुद्दिनका धेरै किस्साहरु सुन्ने हो भने उनी अरुजस्ता सामान्य मानिस नभएर नेपाल सरकारका लागि अर्कै ब्रमाहण्डबाट झिकाइएका विशेष पात्र हुन् जस्तो लाग्छ। बसरुद्दिन मात्रै प्राय सबै मेडिकल कलेज सञ्चालक उनीजस्तै जब्बर देखिन्छन्। परिणाममा अलिकति तलमाथि मात्रै हो।
ति सबै मेडिकल शिक्षा व्यापारीको कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग निकट सम्बन्ध रहेको देखिन्छ। त्यसमध्येका बसरुद्दिनको त सत्तारुढ दल नेकपाका विशिष्ट भनिएका नेताहरुसँग नै निकटको सम्बन्ध रहेको देखिन्छ। केपी ओलीदेखि प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, वामदेव गौतम, विष्णु पौडैल आदि हस्ति उनका सहज एक्सेस र विशेष सम्बन्ध भएका नेताहरु हुन्।
उनी यसअघि दुईपटक माके र एमालेका तर्फबाट चुनाव लडेकाले नेतासँगको साँटगाँठलाई अन्याथा लिनुपर्ने त कुनै कारण छैन। तर उनले दिन दहाडै कानुन आफ्नो हातमा लिँदा समेत सरकारमा रहेका दलसँगका तस्विर सार्वजिन हुँदै जाँदा पनि सरकार कानमा तेल हालेर घाममा सुत्नुले सरकारवादी नेताहरु र बसरुद्दिन अन्सारीहरुको सम्बन्धमाथि आशंका जनमाएको छ।